Casting Parts, Lost savoka Casting, SilIca Sol Casting, vy Casting - Tongda
Agriculture milina Parts
Milina fitrandrahana castings
Iron ario faritra
Steel ario faritra
Lost sombin-javatra Casting
VERY Fa savoka Casting
Very-savoka fanariana (antsoina koa hoe "fampiasam-bola fanariana", "fanariana marina tsara", na cire perdue amin'ny teny frantsay).
VERY Fa FOAM Casting
-Sombin-javatra very fanariana (LFC) dia tandindon 'evaporative-modely mandatsaka dingana izay dia mitovy amin'ny fanariana fampiasam-bola afa-tsy sombin-javatra no ampiasaina fa tsy ny fomba savoka.
Silica Sol fanariana dia iray mahazatra fanariana fampiasam-bola dingana ho an'ny fampiasam-bola castings Stainless vy.
Machining dia misy ny dingana isan-karazany izay tapa-manta dia nanapaka zavatra iray tiana ho farany endrika sy habe amin'ny alalan'ny maso ara-nofo-fanesorana dingana.
Nohitsakitsahiko (fantatra amin'ny anarana hoe maika ihany koa) dia ny dingan'ny fametrahana taratasy vy fisaka in na banga na coil teny an-nohitsakitsahiko asa fanaovan-gazety izay fitaovana, ary ho faty amin'ny teny ambonin'ny ny
Maty fanariana dia vy fanariana dingana izay miavaka amin'ny vy anidina nanery ambony eo ambany fanerena an-bobongolo lavaka.
Manorina orinasa mpamokatra entana dia dingana mahakasika ny famolavolana ny metaly voafaritra compressive mampiasa hery.
Sand fanariana, ny tena be mpampiasa dingana fanariana, itarina fasika mampiasa lasitra mba hanangana vy faritra sarotra azo natao tamin'ny efa ho misy firaka.
Tongda manana ekipa matihanina ny injeniera ny manao fikarohana momba ny fitaovana isan-karazany, ary koa ny hanana mpanjifa 'OEM vokatra. Mba hahazoana antoka ny toetra, Tongda nanorina ny laboratoara izay manana fitaovana toy X-ray Tester, CMM, Spectrum Analysis Instrument, Metallographic Rehefa nandinika Instrument, andriamby sombiny lnspector, hamafin Tester, Fiantraikan'ny Test Machine.and Universal Tester hery.
Tongda dia nahavita tsara laza ao an-trano sy any ivelany sy ny fifaninanana vidin'ny, azo antoka toetra, amin'ny andro fanaterana sy ny tsara rehefa avy-fanompoana fivarotana, Tongda mikendry ihany koa ny amin'ny lasa mpitarika fanariana manufactuer ao Shina.